Cruso Granito: မှအဆင့်ဆင့်တက်လာသည့်လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်အားဖြင့်တစ်ဆင့်
TILES Materia ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း
အမှု 60 * 120 အရွယ်အစားတွင်လှည်းများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်. သော်ငြားလည်း; အရင်းအမြစ်နှစ်ခုအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အကြံပြုသည်.
ကြီးမားသောပြားများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်စျေးကွက်ပေါ်ရှိခြောက်သွေ့သောခုတ်စက်အမျိုးမျိုးကိုသုံးရန်အကြံပြုသည်. အခြားကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်မမှန်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်. အဆိုပါ cutter ဓါးပျက်စီးသို့မဟုတ်လွန်းဝတ်ဆင်လျှင်,.
အဆိုပါကော်ကို Slab နှင့် Screed ၏နောက်ကျောတွင်နှစ် ဦး စလုံးလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်. ထို့အပြင်ဤစစ်ဆင်ရေးအတွက်လည်းတိကျသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရေးဆွဲခြင်းကိုရေးဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲတပ်ဆင်ခြင်းကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်သည့်လေပူဖောင်းများကိုဖန်တီးရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်.
Slabs များအတွက် 2MM ပူးတွဲသည်များသောအားဖြင့်ကြမ်းပြင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နဂိုအတိုင်းရှိသည့်နေရာများတွင်သင့်လျော်စွာထောက်ခံသည်.
0.8 caliber (ဆိုလိုသည်မှာ 1200 x 2400 မီလီမီတာ mininal အရွယ်အစား) သည် 1998 x 2398 မီလီမီတာပါသောအရွယ်အစားဖြစ်သည်။.
တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း levelers အသုံးပြုမှု
အဆိုပါကော်ကို Slab နှင့် Screed ၏နောက်ကျောတွင်နှစ် ဦး စလုံးလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်. ထို့အပြင်ဤစစ်ဆင်ရေးအတွက်လည်းတိကျသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရေးဆွဲခြင်းကိုရေးဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲတပ်ဆင်ခြင်းကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်သည့်လေပူဖောင်းများကိုဖန်တီးရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်.
တပ်ဆင်ပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးသန့်ရှင်းရေး
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်မျက်နှာပြင်၏နောက်ကျောတွင်နှစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။ installation အတွင်းအကူအညီလိုသည့်လေပူဖောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စံပြမဟုတ်သောမူကြမ်းကိုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်.